Gorilla Ku Nool Maraykanka Oo Laga Helay Covid-19 – Heemaal News Network
Gorilla Ku Nool Maraykanka Oo Laga Helay Covid-19
Dhowr xabo oo ka mid ah xayawaanka loo yaqaan Gorilla-ha oo ku noolaa xerada duurjoogta lagu xanaaneeyo ee loo yaqaan Safari Park ee magaalada San Diego ee dalkaasi Maraykanka ayaa laga helay caabuqa ‘coronavirus’ taasoo la rumaysan inuu yahay kiiskii ugu horeeyay ee laga helo Gorilla-ha ku nool Maraykanka iyo adduunka oo dhan.
Agaasimaha beertan duurjoogta lagu dhaqo oo la yidhaa Lisa Peterson, ayaa sheegtay in Isniintii in sideed gorilla ah oo ku wada nool beerta la ogaaday inay qabaan fayraska covid-19 dhowrna ay qufacayeen.
Waxay u muuqataa in cudurka laga helay Gorilla-han uu uga soo gudbay dhinaca mid ka mid kooxda daryeelka duurjoogta ka shaqaysa oo isagana caabuqan laga helay, balse markii hore ahaa mid aanay astaamaha caabuqan ka muuqan, inta badana xidhan jiray afsaarka.
Dhakhaatiirta xoolaha ayaa si dhow ula socda gorilla-han waxayna ku sii nagaan doonaan hoygooda beerta gudaheeda ah oo ku yaal waqooyiga magaalada San Diego, ayuu yiri Peterson. Waqtigaan la joogo, waxaa la siinayaa fiitamiino, dareere iyo cunto laakiin ma lahan daaweyn u gaar ah fayraska ayuu intan daba dhigay.
Khubarada duurjoogta ayaa walaac ka muujiyey fayraskan corona ee ku dhacay gorilla-ha, waxana ay sheegeen in virus-kan oo khatar galinayo nolosha xayawaankan Gorrilla-ha oo la rumaysan yahay in boqolkiiba 98.4 qiyaas ahaan ay hida-sidayaashoodu yihiin kuwo ay aadamaha la wadaagaan.
FBI-da Mareykanka Oo ka Digtay Cabsi Amni Oo Laga Qabo Xaflada Caleemo Saarka Biden
Qaar ka Mid ah Ciyaartoyda Koonfur Galbeed Oo Caawa Lagu Dhaawacay Muqdisho.(Sawirro)
Sadax Askari Oo Lagu Dilay Toogasho Maanta ka Dhacday Muqdisho.